I-Instagram ingena kuzo zonke iimarike ukukhuphisana | Izidalwa ezikwi-Intanethi
UJose Angel | | Uyilo lwewebhu, I intanethi
I-Instagram iyaqhubeka nokuqala ukugquma amaphephandaba ngohlaziyo olutsha. Uhlaziyo olutsha olungelulo "ukulungiswa kweBug kunye nokuphuculwa kokusebenza" konke konke, yintoni nayo. Kwaye, kwiintsuku nje ezidlulileyo sivile iindaba ezininzi esiza kuzithetha apha. Ngokuqinisekileyo, abasebenzisi benethiwekhi bathi sele beyazi, kuba banokuyisebenzisa ngoku. Kodwa ayilulo lonke uhlaziyo oluye lwaphuma kwaye bazokukhangela zonke iintlobo zeemarike ukuze bakhuphisane.
Iimarike ze-instagram zingena zahlukile kakhulu kwinto eyayicwangciselwe yona ekuqaleni Le App kwaye ikude lee ekubeni yindawo yokunxibelelana nokunxibelelana nabanye abantu, iyayixhasa imbono kamabonakude omtsha. Umsebenzi wokubukela Umabonwakude we-IGTV uyakuqinisekisa oko, kodwa ngaphandle kokufuna ukuphambuka kubalandeli awathi waba mkhulu kubo. Emva kwayo yonke loo nto, abayili kunye nehlabathi lomfanekiso "we-tuli" walinika igama. Ngoku i abaqulunqi kunye neefoto baya kuba nakho ukuthengisa iimveliso zabo ngqo kwivenkile ye-instagram.
1 Yintoni i-IGTV?
2 Ukuthengisa iimveliso ze-instagram
I-Instagram nje elula. Ukunikwa sonke isikhalazo esivela kubasebenzisi sokukwazi kuphela ukuzibonakalisa kwimizuzwana eyi-15 kumabali kunye nomzuzu omnye kwi amxesha esi sixhobo sivele. Ngoku abadali bemixholo banokwenza iividiyo ezimileyo yoqobo njengeYouTube. Ezi vidiyo ziya kuba nexesha elingaphezulu kweyure enye. Into ngokucacileyo ekhuphisana nentengiso yeYouTube.
Ukufikelela kulo msebenzi bongeze i-icon yomabonwakude ephezulu ngasekunene. Apho ungabona abantu obalandelayo 'ngamajelo' abo. Ukuba awunayo, i-Instagram inikezela abantu abacetyiswayo kwaye ukuba kwimeko yakho nguwe ofuna ukudala, kwisondo lesethingi, cofa kwaye 'wenze ishaneli'. Iya kukucela ukuba wamkele imigaqo yokusetyenziswa kweli candelo le-Instagram kunye ne-voila, sele unayo ijelo lakho.
Kuya kufuneka kwakhona kuthiwe ukuba ayizizo iividiyo ezibukhoma njengalezo bezikude 'kwiiBali'. Lo mxholo unokuba nohlelo lwangaphambili kunye nomsebenzi ocacileyo kodwa kuguqulelo olumi nkqo. Ngapha koko, njengale ntanethi yenethiwekhi, abasebenzisi banokushiya izimvo zabo kwaye kunokwenzeka ukuba babone ukuba bangaphi abantu abakubonileyo okupapashiweyo, kodwa linani kuphela, hayi igama lomsebenzisi ngokungathi ungabona 'kwiBali'.
Ewe, ngalo mzuzu awuyi kuba nethamsanqa lokuhlawulisa izimvo, nangona ngubani owaziyo ukuba kwixa elizayo, njengoko kwenzekile ngeYouTube siya kuba nakho ukubona 'I-Instagramers'Ukutshaja ngokuthe ngqo ngenkqubo efihliweyo enje ngeqonga likaGoogle.
Ukuthengisa iimveliso ze-instagram
I-Instagram iya kusebenza kuhlaziyo olulandelayo olubalulekileyo lokuthengisa imveliso. Ngexesha elidlulileyo sibonile ukuba libeka kanjani amakhonkco okuthenga, ekusetyenzisweni kwawo akubalulekanga kangako. Kodwa ngeli xesha ayizukunxibelelana ngokulula kwiivenkile zangaphandle njengangaphambili. Ngoku ndiza kuyiphumeza Inkqubo yokuthenga ngaphakathi kwesicelo ngokwaso.
Oku kuthetha ukuba iiprofayili zabafoti okanye abayili baya kuba nakho ukufaka imisebenzi yabo hayi ukubonisa nje bona, kodwa ukufumana ingeniso kubo ngokuthe ngqo. Ke ubuncinci bayiphakamisile kwiiofisi zeZuckerberg -Icandelo le-Instagram-.
I-Instagram ibe yindlela yokunxibelelana kunye nokuthengisa ngokuthe ngqo kubathengi bakho. Ukuba uqhagamshela abantu abaliwaka okanye abalishumi lamawaka ngemveliso okanye umbono onokuwuthengisa, unentengiso
I-Instagram ifuna ukuvumela abasebenzisi bayo ukuba bathenge ngqo ngaphakathi kwenethiwekhi kwaye uyisebenzisele ukuhlawulela izinto ezahlukeneyo kunye neenkonzo, ifana ncam noko ikhuphisana nayo i-WeChat eTshayina. Olu hlaziyo lunokwenzeka luza emva kokwenziwa kweprofayili enikezelwe ngokukodwa ukuyilwa yi-Instagram, eya kubonisa ukuthanda kwiqonga ukukhulisa olu luntu. Iprofayile njengakwezinye iimeko yenziwe nguGoogle, iYouTube kunye ne-Instagram uqobo ukulayisha owona mxholo ubalaseleyo womzuzu. Khumbuza umsebenzi wabayili njengendlela yokukhulisa olu luntu ngeprofayili esemthethweni @ Design
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Uyilo lwewebhu » I-Instagram ingena kuzo zonke iimarike ukukhuphisana
Uyijikeleza njani ividiyo kwikhompyuter yakho okanye iselfowuni